[ဗွီဒီယို] ကျွန်ုပ်တို့၏ Android အတွက် nandroid အရန်တစ်ခုကိုအရန် ပြုလုပ်၍ တစ်ဆင့်ချင်းပြုလုပ်ရန် Androidsis
[ဗွီဒီယို] Android အတွက် backup nandroid backup ကိုတစ်ဆင့်ချင်းပြုလုပ်ရန်
အောက်ပါလက်တွေ့ကျသောသင်ခန်းစာတွင်၊ လူမှုကွန်ယက်များမှတဆင့်လက်ခံရရှိသောတောင်းဆိုမှုများကြောင့်ဖြစ်သည် Androidsis ပါ, ငါသင်တစ် ဦး ချင်းစီ -by- ရှင်းလင်းရှင်းလင်းဗီဒီယိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုအသေးစိတ်ပြသရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Android operating system တစ်ခုလုံးကို nadroid backup လုပ်ရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်း.
ဒီထက်ပိုသည်မဟုတ်သောဤ nandroid backup အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ Android operating system တစ်ခုလုံးကိုအပြည့်အဝ backup လုပ်ထားသည်အထက်ပါအရန်ကူးယူသည့်နေ့တွင် Android စနစ်တစ်ခုလုံးကိုပြည်နယ်သို့ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။ Terminal တွင်ချိတ်ထားသည့်မည်သည့် zip မဆိုသို့မဟုတ်၎င်းကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည် system နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်းဖြစ်စေသည့်မည်သည့် zip ကိုမဆိုဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android operating system တစ်ခုလုံး၏ဤအရံသိမ်းခြင်း၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Android ပြင်ပရှိနေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားရန်အကြံပြုလိုသည်မူရင်းကော်ပီသည်ကျွန်ုပ်၏စက်တွင်ရှိမရှိမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးရှုံးခြင်းကိုရှောင်ရှားသည်။ အထူးသဖြင့် flashing cooked ROMs တွင်ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ကြီးကြပ်မှုတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သိုလှောင်မှုမှတ်ဉာဏ် (သိုမဟုတ်) sdcard ကို format လုပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏တန်ဖိုးရှိသောကော်ပီလုံခြုံရေးကိုဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်၏အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်သောအရံတစ်ခု။
သငျသညျဤ post ၏ခေါင်းပေါ်မှာရှင်းလင်းဗီဒီယိုတွင်တွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, ဖြစ်စဉ်ကိုအလွန်ရိုးရှင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကျောက်တလုံးနှင့်အတူငှက်နှစ်ကောင်ကိုသတ်ဖို့ခွင့်ပြု တူညီသောလုပ်ငန်းစဉ်၌ကျွန်ုပ်တို့သည် EFS ဖိုင်တွဲ၏မိတ္တူကူးယူနိုင်လိမ့်မည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖိုင်တွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးအချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်အချို့သော ROM များကို flash လုပ်ခြင်းဖြင့်ပျောက်ဆုံးသွားတတ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာဤကိစ္စများသည်နည်းပါးလာသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းအကြံပေးသည်အတိုင်း၊ အမှု၌သာအရန်ကူးထားခြင်းကပိုကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏အလွန်လေးနက်သောပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » [ဗွီဒီယို] Android အတွက် backup nandroid backup ကိုတစ်ဆင့်ချင်းပြုလုပ်ရန်
Cristian Moreno ဟုသူကပြောသည်
cristian moreno အားပြန်ပြောပါ
eu meu beckup ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ စနစ်ကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက် outro ၏တိကျသော download သို့မဟုတ် download လုပ်ခြင်း။ သင် esse ကို download လုပ်ရန်မည်သို့လုပ်နိုင်သနည်း။
Pabllo Rodrigues de Araujo အားပြန်ပြောပါ
Cristian Javier Moreno ဟုသူကပြောသည်
cristian Javier moreno အားပြန်ပြောပါ
အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် !!! နှင့်ကျွန်ုပ်မေးခွန်းမှာ၎င်းကိုပြင်ပကိရိယာတစ်ခုတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းဥပမာဥပမာ pendrive ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ backup တွင် 12Gb ရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ထည့်သွင်းခဲ့သောပြန်လည်ဆယ်တင်မှုကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းလားဆိုတာကျွန်ုပ်မသိပါ။ (Philz clockworkmod ၏ touch version) ။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းသောအခါ nandroid bachup မရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ပစ္စည်းနှင့်အခြားသူများကိုအမြစ်တွယ်မိပါပြီ။ Samsung အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မတူညီသောမော်ဒယ်များမှမတူညီသော roms အမြောက်အများတပ်ဆင်ထားသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်မသေချာသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိခဲ့ဖူးသော (ငါရှိခဲ့သည့် s2 i9100 အတွက်နှစ်မျိုးလုံးအတွက် Samsung စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သည်) rom သို့ပြန်သွားသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က၊ ယခုလက်ရှိ s4 i9500 အတွက်) ကျွန်ုပ်နှစ်ခါစလုံးမှာဖုန်းကို odin နဲ့လုပ်ပြီးဖုန်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရပါမည်။ မော်ဒယ်နှစ်ခုစလုံးတွင်အမှားတစ်ခု ... ဒါမှမဟုတ်သူတို့ samsung stock firmware ၏ backup များကိုပြန်ယူလို့မရဘူးလား။ တခါတရံငါအဲဒီပြန်လည်နာလန်ထူသံသယရှိကြသည်။
nandroid backup လုပ်ရန်နေရာအလုံအလောက်ရှိမရှိသင်စစ်ဆေးပြီးပြီလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ပြန်လည်နာလန်ထူပြီးသင်ပြောသမျှ၊ အပြီးသတ်သည်အထိပြီးပြည့်စုံပါတယ်၊ ပြန်လည်စတင်ဖို့ပြောတယ်၊ restart ပြန်လုပ်ဖို့တောင်းတယ်၊ စဖွင့်တဲ့အခါ screen အေးခဲသွားတယ်။ ငါအဲဒီမှာလုပ်လား
ကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပါပဲ၊ ကျွန်ုပ် recovery mode တွင်မကောင်းသောနည်းများဖြင့်ကျွန်ုပ် Terminal ကိုပိတ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ဘက္ထရီကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုမသိသောကြောင့်ပုံမှန်ဖွင့်သောအခါ၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။ Lenovo က android စွမ်းအားဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မူလမျက်နှာပြင်မှဖြစ်ပျက်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်မိုဘိုင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပေးပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမှသာဖွင့်ပေးသည်။
ငါတပ်ဆင်မှုနှင့်အတူပြproblemနာရှိပါကငါဖုန်းကို restore နိုင်သေချာစေရန်, ROM ကို install မတိုင်မီ backup လုပ်ထားလုပ်နေတာ။ ငါမှာ TWRP လည်းရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုလိုအင်္ဂလိပ်လိုမဟုတ်ဘဲစပိန်လိုပြောတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် backup option ကိုထည့်သောအခါ EFS သည်၎င်းကိုရွေးနိုင်ပုံမပေါ်ပါ။ အောက်ပါကိုသာအမှတ်အသားပြုသည်။
cursor သည်ညာဘက်ထောင့်တွင်မမြင်နိုင်ပါ။ သို့သော် screen ပေါ်သို့တက်။ သွားနိူင်သည်။ သို့သော်ထို menu ထဲတွင်သင်ကြားရန်အခြားဘာမျှမရှိတော့သောကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်တို့သည်“ ခရစ်ယာန်” တွင်စကားပြောနိုင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်များပြားသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများ၊
စပိန်နှင့်လျော့နည်းရှုပ်ထွေး၌တည်၏။ မသိသောသူမူကားမမြင်နိုင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အရန်ကူးခြင်းပြီးစီးပါက၎င်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်သိမ်းဆည်းရမည်နည်း။ Terminal အတွင်း၌နေရာသိပ်မကျန်သဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသို့လွှဲပြောင်းရန်ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားပါသည်။
Samsung က Samsung Galaxy S6 နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကိုအံ့အားသင့်မှာပါ